အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Yinmyo - ဝီကီပီးဒီးယား
Thanks for contributing in Myanmar Wikipedia with your medical-related articles. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၈:၄၅၊ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank you so much, Dr. Lotus Black! Yinmyo (ဆွေးနွေး) ၀၈:၅၄၊ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Yinmyo&oldid=288236" မှ ရယူရန်